Anopenya tambo yeApple Tarisa | Ndinobva mac
Kune mazuva apo vanhu vazhinji vanobuda kunodya mabhizinesi, vane maappointments akasarudzika, kana kungoda kuve nezvinhu zvinoonekera pamusoro. Kune vese vateveri vari mune ino mamiriro ndezve izvo zvandinotsaurira imwe yenyaya dzangu nhasi.
Ini ndatsvaga mambure kuti tambo dze Apple Watch mune izvo kupenya kwave kushandiswa mukugadzira kwavo, kunowanzozivikanwa kunzi maGlitter tambo nekuti ndinofunga kune vateveri vazhinji vanozofara kukwanisa kupfeka imwe yeaya tambo neako Apple Watch.
Uyai hongu! Ndinoziva kuti haisi tambo inokodzera zvese zvido, asi zvakare, ndinodzokorora kuti maererano nezvinodiwa hapana chakanyorwa. Tambo yaunogona kuona mumifananidzo iyi yechipiri vhezheni inotengeswa pachitsuwa ichi uye ndeyekuti mune yekutanga dhizaini pane kukundikana kwakaitwa Vatengi vanogunun'una nekurumwa pachiwoko nekuda kwechinhu chinoshandiswa pakugadzira, vachitaura nezvekupenya kwezvinhu kana kupenya.
Iyo mhete inobata chikamu chekupedzisira chetambo patinoisa paruoko, panguva ino yakakamurwa kuita zvikamu zviviri uye chete Zvinhu zvinopenya zvakaiswa kunze, zvichisiya mukati zvakatsetseka neganda, senge yakasara yetambo.
Isu tinayo inowanikwa mune akati wandei mavara kuitira kuti iwe ugone kusarudza kubva pakati pavo iwo ayo anokwezva kutarisisa kwako uye oite yakakwana hurongwa. Iko kubatanidza neApple Watch kunoitwa nechero chinongedzo ichifunga nezve dhizaini iyo Apple pachayo yainayo.
Mutengo wacho ndewe 10,72 eurossy inowanikwa kune ese maApple Watch saizi, 38mm uye 42mm. Iwe unayo inowanika mu next link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Glitter tambo yeApple Watch
Apple inotangisa Sway, yayo nyowani yezororo kushambadzira